. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ဧပရယ် ဖူးလ်
ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ရပ်စောင့်နေတုန်းပဲ ..
တချိန်တခါတုန်းကတော့ ဒီလိုနေ့ရက်မျိုးတွေမှာ ငိုသံစွက်တဲ့ ရယ်သံတွေနဲ့ ချိုမြိန် သာယာခဲ့ဘူးတယ် ..
စိတ်ရှုပ်နေတဲ့ ဧည့်ကြိုကောင်တာက အမျိုးသမီးကိုလည်း အားနာလှပြီ .. သူမ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ နောက်တကြိမ် တောင်းတောင်းပန်ပန် ပြန်ရှာခိုင်းမိတော့ ..
"အမရယ် .. ကျမ ရှာတာလည်း ကုန်နေပါပြီ .. ဒီနာမည်နဲ့ ကား အက်ဆီးဒင့် လူနာ လုံးဝ မရှိပါဘူးရှင် .." ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ သူမကို လှည့်မကြည့်တော့ပဲ ထွက်သွားတော့တယ် ..
စိတ်ပျက် လက်ပျက်နဲ့ ရပ်ထားခဲ့တဲ့ ကားနားရောက်တော့ ..
"April fool" ပြိုင်တူ အော်လိုက်တဲ့ အသံကြောင့် သူမ လန့်သွားခဲ့တယ် .. ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ သူတို့မျက်နှာတွေ မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျမ ဒေါသတွေလည်း အထွဋ်အထိပ် ရောက်လို့ပေါ့ .. ကျမ အရူးလုပ်ခံလိုက်ရတယ်လေ .. တချိန်တည်းမှာပဲ ကျမ ရှက်စိတ်နဲ့ ဒေါသ စိတ် ပေါင်းပြီး မျက်ရည်တွေ စီးကျ လာခဲ့တယ် ..
ကျမ မျက်ရည်ကို မြင်တော့ ..
"ငယ် .. ငယ် .. မငိုပါနဲ့ကွာ .. ကိုယ်က စလိုက်တာပါ .. ပြီးတော့ ဟိုကောင်တွေ တရားခံ .."
ကျမ ကလေးတယောက်လိုပဲ ကားဘေးနား ငုတ်တုတ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး အားရပါးရ ငိုချလိုက်တယ် .. ဟုတ်တယ်လေ .. ကိုယ့်ချစ်သူတယောက်လုံး ကားအက်စီးဒင့်ဖြစ်တယ်လို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန် မိန်းကလေးတယောက် အနေနဲ့ ဘယ်လောက်များ စိုးရိမ် ပူပန်သွားလိမ့်မလဲဆိုတာကို မတွေးမိလို့ ခုလို စလိုက်တာလား ..
"ငယ် .. ကိုယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ .. မငိုနဲ့တော့နော် .. ဒီလောက် ဖြစ်သွားမယ် မထင်လို့ စလိုက်မိတာပါ .. ကားပေါ်တက် .. ကိုယ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်နော် .."
အပြန် လမ်းတလျှောက်လုံးလည်း သူက ချည်း စကားတွေ များလာခဲ့တယ် .. တောင်းပန်စကားလည်း အထပ်ထပ် ဆိုရင်းပေါ့ ..
ဒီလိုပါပဲ .. ကျမ ချစ်သူရ ကံကောင်းခဲ့လား ကံဆိုးခဲ့လား ကိုယ်တိုင် မဝေခွဲနိုင်ခဲ့ဘူး .. ကျမ ချစ်သူက ကျမပြုံးနေရင် ငိုစေသူ .. ကျမ ငိုနေရင်လည်း ပြုံးစေနိုင်သူ ..
အစ အနောက်သန်တဲ့ သူ့ကြောင့် ကျမ အမြဲတမ်း ငိုခဲ့ရတယ် .. ပြီးတော့ ပြောသေးတယ် .. ချော့ချင်လို့ ငိုတဲ့ထိ စတာတဲ့ ..
တခါကလည်း ကျမတို့ ချစ်သူသက်တမ်း ၂နှစ် ပြည့်မှာ သူ ချိန်းထားတဲ့ နေရာကို တော်တော်နဲ့ ရောက်မလာဘူး .. ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ..
"ငယ် .. ကိုယ်ငယ့်ကို ပြောစရာရှိတယ် .." သူ အမြဲတမ်း တခုခု ပြောစရာရှိတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင်ကို ကျမ စိတ်ထဲမှာ စိုးရိမ် ပူပန်မှုတွေ ကြီးစိုးနေတတ်တယ် ..
"ကိုယ်ပြင်လို့ မရတဲ့ အမှားတခု လုပ်ခဲ့တယ် .. ငယ် ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ .." သူက ဒီလိုပါပဲ အမိန့်သံတွေနဲ့ ကျမဘ၀ကို ကြီးစိုးချင်တဲ့သူ ..
"ကိုယ်မိန်းကလေးတယောက်ကို လက်ထပ်ရတော့မယ် .." ဒီစကားသံဟာ ကျမအတွက် ဘယ်လောက်များ ရက်စက်ပါသလဲ ..
"ကိုယ့်ကို စကားတခွန်းလောက် ပြန်ပြောပါဦး .."
"ကိုက ဘာစကား ကြားချင်တာလဲ .. ငယ်က ကြည်ဖြူပါတယ် .. အဲဒီ မိန်းကလေးနဲ့ လက်ထပ်ပါလို့ ပြောစေချင်တာလား .." ငိုသံမစွက်အောင် ကြိုးစားပြောတဲ့ ကြားကကို မျက်ရည် လွယ်လွန်းတယ် ..
ကျမ မျက်ရည်ကို မြင်မှ .. မျက်နှာ ပြုံးထေ့ထေ့နဲ့ ..
"ဘာလို့ ငိုတာလဲ .. ကိုယ်လက်ထပ်မှာ ဘယ်သူလဲ သိလို့လား .. ကိုယ်က ချစ်လို့စတာ .. ကိုယ်လက်ထပ်ချင်တာ ငယ်ပေါ့ .." တဲ့လေ ..
ဘယ်လိုလဲ .. ကျမ ရူးသွားနိုင်လောက်တယ်နော် ..
ချစ်ခြင်းတွေကို ရူးသွပ်စွာ ခံစားတတ်တဲ့ ကျမနဲ့ အရာရာကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြတ်သန်းတတ်တဲ့ သူ .. နှစ်ယောက်သား အရာရာမှာတော့ ထပ်တူမကျနိုင်ခဲ့တာပဲလေ ..
ကျမကို နောက်ထပ် မစပါနဲ့တော့ .. လို့ တောင်းတောင်း ပန်ပန်ပြောတိုင်းလဲ .. ကျမရဲ့ မျက်ရည်တွေကို သုတ်လို့ နောက် လုံးဝ မစတော့ဘူးနော် ဆိုတာနဲ့သာ အဆုံးသတ်လေ့ ရှိတာပါပဲ ..
"ငယ် .. ကိုယ်တောင်းပန်တယ်နော် .. စိတ်မဆိုးနဲ့တော့ .."
ကျမ အတွေးစတွေကို ဖြတ်လို့ သူ့ဘက်ကြည့်မိတော့ သူ့မျက်နှာက ပကတိ ကြည်စင်နေတာပါပဲ .. သူက အမြဲ ဒီလိုပဲလေ .. မျက်ဝန်းတွေကိုက သိပ် ရိုးသားလွန်းပါတယ် ..
"အရမ်း စိတ်ဆိုးသွားလား .."
"စိတ်ဆိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး .. စိတ်ပူသွားတာပါ .. ဒါပေမယ့် ငယ် ဒါထက်ပို မခံစားနိုင်တော့ဘူး .. ကိုယ့်ချစ်သူတယောက်လုံး မတော်တဆဖြစ်ပြီး ဆေးရုံရောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက ဘယ်လောက်ထိ ဆိုးရွားတဲ့ ပူပန်မှုလည်း ဆိုတာကို မစဉ်းစားမိဘူးလား .. ကိုယ်ချင်း မစာမိဘူးလား .. ငယ့် ဒီလိုပုံစံကို မြင်တော့ ၀မ်းသာသွားလားဟင် .." ကျမ နာနာကျည်းကျည်း ဆိုမိတယ် ..
"ဟာ .. ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး .. ကိုယ်မရည်ရွယ်ပါဘူး .. သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ငယ်က ကိုယ့်ကို သိပ်ချစ်မှန်းသိတော့ .."
"အင်း .. သူငယ်ချင်းတွေ ကြားထဲမှာ ဟာသတခုပေါ့နော် .."
"ဟာ .. ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး .. အထင်မလွဲပါနဲ့ကွာ .. ကိုယ်တကယ် တောင်းပန်ပါတယ် .. ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါကွာ .. နောက် ဘယ်တော့မှ ငယ့်ကို စိတ် မပူစေရတော့ဘူးနော် .. ကိုယ်တကယ် ကတိပေးတယ် .."
"ဟင့်အင်း .. ငယ် ယုံလို့ မရဘူး .. ဒီလိုပဲ ထပ် ထပ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲ စိတ်ဒုက္ခရောက်နေရဦးမှာပဲဆိုတာ သိတယ် .."
"ကိုယ်ဘယ်လို တောင်းပန်ရမလဲကွာ .. အဲလိုကြီးတော့ မပြောပါနဲ့ .. ကိုယ့်ကို ခွင့် မလွှတ်နိုင်ဘူးလား .. ကိုယ်နောက်တခါ ခုလိုမျိုး ထပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်လေ ကားတကယ်တိုက်ပါစေကွာ .."
ကျမ အလန့်တကြားနဲ့ ..
"အို .. ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေတာလဲ .. နမိတ်မရှိ နမာမရှိနဲ့ .."
"ဟုတ်တယ်လေ .. ငယ်ကမှ ခွင့်မလွှတ်တာ .. နောက်တခါ ခုလိုအဖြစ်မျိုး ထပ်လုပ်မိရင် .."
"တော်တော့ ဆို .. မပြောနဲ့တော့ .. တကယ်လို့ ကိုသာ ခုလိုမျိုး ငယ့်ကို ထပ်ပြီးတော့ စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်ရင် .. ကို ကားမတိုက်နဲ့ ငယ့်ကိုပဲ ကားတိုက်ပါစေ .."
"ဟာ .. ပေါက်တတ်ကရ .. ငယ် လျှောက် မပြောနဲ့ကွာ .."
"အင်းပါ ထပ်မပြောတော့ဘူး .. အဲဒါ အတည်ပဲ .. ကို သာ နောက်တခါ ခုလို အဖြစ်မျိုး ထပ်မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ .. နော် .. ငယ် ခုနက ဘယ်လောက်တောင် စိုးရိမ်နေတယ် မှတ်လဲ ကိုရဲ့ .."
၂၀၁၀ ဧပြီလ ၁ရက်
မနက် မိုးလင်းလင်းချင်း သူမ စိတ်တွေ လေးလံနေခဲ့တယ် .. ဒီချိန်မှာပဲ တယ်လီဖုန်းသံ မြည်လာခဲ့တယ် ..
သူမ ဆေးရုံမှာ လူတွေကို လိုက်စကားပြောပေမယ့် ဘယ်သူတယောက်ကမှ ပြန်အဖြေမပေးခဲ့ဘူး .. သူမ မောနေပါပြီ .. စိတ်တွေရော ရင်တွေရော ပူလှပြီ .. ကျမ ချစ်သူနာမည်ကို ရှာပေးကြပါ ..
ကျွန်တော် ဒီနေရာလေးမှာ စောင့်နေပါတယ် .. ကျွန်တော့် ချစ်သူ စိတ်ပူပန်စွာနဲ့ ပြေးလာမယ့် အချိန်ကိုပေါ့ .. ဒီတခါတော့ သူမကို အကြာကြီး စိတ်ပူအောင် မလုပ်တော့ပါဘူး .. သူမကို မြင်တာနဲ့ ကျွန်တော် ချက်ချင်း ခေါ်မှာပါ .. ဒါပေမယ့် သူမ ခုထိ ရောက်မလာသေးဘူး ..
သူမကို ကျွန်တော် စောင့်နေပါ့မယ် .. သူမ မလာမချင်းပေါ့ ..
၀န်ခံချက် .. ဧပရယ်ဖူး နေ့အတွက် ၀တ္တုတို တပုဒ်လောက် တင်ချင်တာပါ .. ရေးပြီး သိပ်မကြိုက်ဘူး .. ဖတ်ပြီး မကောင်းရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော် .. :D
ရေးသားသူ မိုးခါး at 4/01/2010 12:08:00 AM